Ukuba unayo iprinta engenazingcingo ehambelana netekhnoloji yeApple AirPrint, ungaprinta iifoto kwi-iPad yakho 2. Njengoku kubhalwa, zimbalwa kuphela iiprinta ze-HP ezinesakhono, kodwa ungabheja ukusebenza kuka-Apple nabanye abavelisi ukubonelela ngakumbi ukhetho .
Ukuba awukwazi ukufikelela kolu hlobo lomshicileli ngaphandle kwamacingo, xa ufaka i-iPad kwikhompyuter yakho yeWindows ungasebenzisa ngokulula iWindows Explorer okanye i-Finder ukuvula ifolda yeDCIM kwi-iPad yakho kwaye ukope kwaye uncamathisele iifoto kwikhompyuter yakho ukuze uprinte.
Ukuprinta ifoto, vula usetyenziso lwekhamera kwaye wenze oku:
1Yenza nkulu ifoto ofuna ukuyiprinta.
Izithonjana zemifanekiso efakwe ngaphambili zivela ezantsi kwe-app yekhamera.
MbiniCofa kwiqhosha leMenyu uze ucofe ku Printa.
Incoko yababini bePrinta iyavela.
3Thepha Khetha iPrinta.
I-iPad ikhangela iprinta ehambisanayo engenazingcingo.
4Cinezela ukudibanisa okanye ukuthabatha iisimboli kwindawo yeKopi.
Oku kucwangcisa inani leekopi ukuba liprintwe.
5Cofa iqhosha lokuPrinta.
Ifoto yakho isendleleni eya kumshicileli!
iziphumo ebezingalindelekanga ze-sodium chloride
Ungarekhoda njani kwi-Android